China Hot mgbali eriri kpara achara decking osisi rụpụta na Factory | Achara ọlaedo
Elu nke achara laminated osisi nwere ezigbo mma na ogologo ederede. Boardlọ ahụ nwere ụdị achara. Na mgbakwunye, nhazi ya dị iche, na mmetụta ịchọ mma dịkwa iche. E jiri ya tụnyere osisi siri ike n'ozuzu ya, ike igwe nke achara ejiri dị elu, na ọnụọgụ mbelata dị obere. ReBO n'èzí na-agụnye achara 18 carbon gbara ọkpụrụkpụ, nke nwere mmanụ ma nwee obere vidiyo.
A na-arụpụta bamboo a kpara akpa site na usoro pụrụ iche nke na-eji 100% nke Moso Bamboo, na-eme ka ọ sie ike ma na-adịgide adịgide karịa achara mgbe niile.. it siri ike ma sie ike karie oke ohia. Achara ejiri eriri bamboo bụ otu n'ime nhọrọ nhọrọ ụlọ kachasị sie ike dị, nke siri ike karịa osisi siri ike ọdịnala. Srand nsị achara na ala na-eguzogide mmiri karịa ala achara ndị ọzọ na ihe ndị ọzọ. REBO achara decking ga-abụ nhọrọ dị mma maka gị.
Ogwe bamboo nwere obere dayameta, mgbidi oghere na nnukwu nkọ, na nhazi usoro ya dị iche na nke osisi. Ike na njupụta nke achara dị elu karịa nke osisi nkịtị, ya mere, ike nke ngwaahịa achara karịrị nke ngwaahịa osisi. Thelọ achara ahụ nwere ederede dị larịị ma dịkwa mma, agba dị mfe, dị mfe ncha ọcha, dye na carbonize. Enwere ike ịhazi achara ka ọ bụrụ ezigbo ngwọta maka ịmepe mpaghara n'èzí dịka ọdọ mmiri, patios, na ụzọ ndị ọzọ.
Elu nke achara laminated osisi nwere ezigbo mma na ogologo ederede. Boardlọ ahụ nwere ụdị achara. Na mgbakwunye, nhazi ya dị iche, na mmetụta ịchọ mma dịkwa iche. E jiri ya tụnyere osisi siri ike n'ozuzu ya, ike igwe nke achara ejiri dị elu, na ọnụọgụ mbelata dị obere. ReBO n'èzí na-agụnye achara 18 carbon gbara ọkpụrụkpụ, nke nwere mmanụ ma nwee obere vidiyo. A na-edozi akụkụ anọ ya niile, ya mere ọ dị mfe ma dị mma iji jee ije na achara. Ozugbo oche achara ahụ dị, bọọdụ ahụ na-adị ntakịrị ntakịrị ka mmiri ahụ ghara ịda na ikuku wee nwee ike ịgbasa. Mbadamba mpe nke mpe nke achara nwere akụkụ dị larịị, nke a pịrị apị na mkpuchi na-enweghị mmịcha. Enwere ike itinye ya iche iche n'akụkụ abụọ.
Osote: Ọchịchịrị agba enweghị deformation achara decking osisi
Achara Decking Boards
Carbonized Strand kpara Bamboo Decking Boards